Inter Milan Oo Qorsheyneysa Bisha Janaayo Inay U Dhaqaaqdo Luka Jovic, Iyo Alexandre Lacazette '
HomeHoryaalka IngiriiskaInter Milan oo qorsheyneysa bisha Janaayo inay u dhaqaaqdo Luka Jovic, iyo Alexandre Lacazette ‘
Inter Milan oo qorsheyneysa bisha Janaayo inay u dhaqaaqdo Luka Jovic, iyo Alexandre Lacazette ‘
October 10, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Xidiga Real Madrid Luka Jovic iyo Arsenal xidigeeda Alexandre Lacazette ayaa lagu soo waramayaa in labadaba ku jiraan liiska Inter Milan ee suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Kooxda heysata horyaalka Serie A ayaa iska iibisay Romelu Lukaku laakiin madaxa fulinta Giuseppe Marotta ayaa xaqiijiyay in Lautaro Martinez uu qarka u saaran yahay inuu saxiixo heshiis kordhin .
Si kastaba ha ahaatee, Alexis Sanchez ayaa la filayaa inuu baxo bilaha soo socda, taasoo keeni karta in Nerazzurri ay raadiso xulashooyinka weerarka.
Sida laga soo xigtay La Gazzetta dello Sport , Inter ma dooneyso inay halis galiso weeraryahan soo kacaya sidaa darteedna waxay u aqoonsatay Jovic iyo Lacazette inay yihiin laba iibsi oo ku habboon.
Jovic ayaa ku guuldarreystay inuu sumcaddiisa ku muujiyo Real Madrid labadii sano ee uu joogay caasimadda Spain – isagoo dhaliyay kaliya labo gool 38 kulan oo uu saftay – waxaana si weyn loo filayaa inuu u dhaqaaqo 2022 -ka.
Dhanka kale, heshiiska Lacazette ee Arsenal ayaa dhacaya xagaaga 2022 -ka iyada oo aysan jirin wax calaamad u ah heshiis kordhin, Gunners ayaana lagu cadaadin karaa iibka bisha Janaayo si aysan ugu waayin xagaaga dambe si bilaash ah.